Shiinaha Juda Kiln-Cross qaybta hoose ee warshadda foornada iyo soo saarayaasha | Yahuuda
Waxqabadka sare ee qalabka
(1) Soosaarka maalinlaha ah ee sarreeya (illaa 300 tan maalintii);
(2) Waxqabadka sare ee badeecada (illaa 260 ~ 320 ml);
(3) Heerka gubashada oo hooseysa (≤10 boqolkiiba;)
(4) Kaalshiyam oksaydh deggan (CaO≥90 boqolkiiba);
(5) Hawlgal fudud iyo xakamaynta foornada (mashiin la'aan, leexasho la'aan, cascade la'aan, foorno la'aan, degsiin dheellitiran oo dhuxul ku jirta foornada);
(6) Yaraynta xaddiga lime ee ay isticmaashay shirkaddu kadib (boqolkiiba 30 boqolkiiba sameynta birta, baahinta iyo isugeynta, boqolkiiba 25 ee soosaarka kalsiyum hydrogen fosfate, boqolkiiba 20 soosaarka ferroalloy iyo 20 boqolkiiba kalsiyum wax soo saarka alumina carbide);
(7) Waxsoosaarka sare ee sheygii cutub kasta kadib sameynta birta (soosaarka wax soo saarka waxaa lagu kordhin karaa in kabadan 1%);
(8) Wasakheynta wasaqda oo hooseysa (qiiqa SO2 ee ka hooseeya heerarka xakamaynta qaranka);
(9) Qashinka la isticmaali karo, sida gaaska qashinka iyo qashinka kale.
Sifooyinka habka wax soo saarka:
1) Nooca foornada ayaa macquul ah, iyadoo la adeegsanayo weelka qaabkiisa. Naqshaddani waxay ka dhigaysaa labbiska qaybinta hawo-qaadashada iyo maaddada si siman u kululaanaysa, taas oo aan kaliya ku habboonayn hoos-u-dhigga lebiska ee maaddada, laakiin sidoo kale kordhinta joogtada ah ee aagga is-weydaarsiga, taas oo ku habboon is-weydaarsiga kuleylka u dhexeeya gaaska iyo sheyga, oo wuxuu siiyaa ciyaar buuxda saameynta kululaynta qulqulka hawada ee dhagaxa. Iska yaree kuleylka. Isbeddelka dhexroorka jirka foornada ayaa faa'iido u leh kululaynta walxaha, gubashada shidaalka iyo ka faa'iideysiga tamarta kuleylka, dardargelinta calcination-ka, sidaas awgeed yareynta isticmaalka shidaalka, qaboojinta liinta si buuxda, yareynta heerkulka ash iyo soo kabashada tamarta kuleylka. Yaree isticmaalka tamarta.
2), mabda'a bixinta hawada waa la qaatay, qeybta hoose waxaa qasbay afuufiyaha, qeybta kore waa qiiqa annular iyo culeyska culeyska culeyska aan shaqeyneynin, iyo taageere kiciya iyo qufulka qiiqa ayaa la isticmaalaa, taas oo aan kaliya ku habooneyn ilaalinta deegaanka iyo ka saarista boodhka, laakiin sidoo kale ku habboon kordhinta mugga hawada iyo soo saarkeeda.
3) keydinta tamarta iyo ilaalinta bey'adda qalabka nuuradda lime firfircoon waa mid fudud oo la isku halleyn karo, nolol dheer, wax soo saar hoose iyo dayactir.
Hore: Qadka Juda Calcium hydroxide line (oo leh nidaamka dheecaanka slag) –EPC Mashruuca
Xiga: Golaha Birta Kiln
Golaha Nidaamka Kaydinta
10. Nidaamyada Bakhaarka Lime dhammeeyey shirkii biinanka alaabta: hawo badan oo baaldi, tuubbooyin aan kala go 'lahayn, silo wareegsan, jaranjarada isku laaban, baararka ilaaliya, waalka dheecaanka ashtariga 1. Qaab dhismeedka birta: oo ay ku jiraan jaranjarada, ilaaliyaha, tuubada xamuulka, waalka badbaadada, heerka qiyaasta waalka dheecaanka, aruuriyaha boodhka, iwm. 2. Qalabka aaladda ururiya: boodhka qashinka waa in lagu hagaajiyaa habka isticmaalka. Hawlgal aan habboonayn wuxuu sababi karaa qarax. Taangiga dushiisa waxaa ku qalabeysan boodh ururiya koronto, ...
Kulan gacanta otomaatiga ah
Nidaamka xakamaynta otomaatiga ah ee ka imanaya duubista elektiroonigga, qaadista, qaybinta otomaatigga ah, xakamaynta heerkulka, cadaadiska hawada, calcining, dheecaanka lime, dhoofinta, dhammaan nidaamka xakamaynta kombuyuutarka la qaatay, oo ay weheliso nidaamka xakamaynta isku xidhka mashiinka iyo mashiinka iyo nidaamka kontoroolka kumbuyuutarka caadiga ah. interface iyo hawlgal isku mid ah goobta, marka loo eego foornada hore ee lime si loo badbaadiyo wax ka badan 50% ee foosha, waxay si weyn u hagaajineysaa wax soo saarka wax soo saarka, yareynta xoogga shaqaalaha, hagaajinta walxaha ...
Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside,